China ọkụ na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ okpomọkụ faiba glaasi ọkụ tube rụpụta na Factory | Jujie
ọkụ na-eguzogide ọgwụ na okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ faiba glaasi ọkụ tube
Braided faiba glaasi sooks
Product nkọwa nke faiba glaasi braided sooks
Mgbe ịchọrọ arụmọrụ dị elu faiba glaasi braided sooks, tụkwasị obi na ogo na ọkachamara anyị na-egosipụta ebe a na alibaba. Inogide na-agbanwe. Na-ejide ma oke oke ma okpomọkụ dị ala. Anaghị eduzi ọkụ eletrik. Ebe a na Jujie, anyị honed anyị n'ichepụta usoro izu okè chee a àgwà ngwaahịa anyị ji n'aka na ị ga-enwe afọ ojuju na. Anyị na-ezute ISO 9001: ụkpụrụ 2015. Anyị na-enye nhọrọ ịzụta oge niile yana nhọrọ ịzụ ahịa zuru oke.
Faiba glaasi uwe na-ekewa n'ime eriri elu roba tube na abụọ oyi akwa anwụrụ, na ya ịke bụ dị ka ndị.
Enwere ike ịhazi data ya.
Foto nke faiba glaasi braid sooks
Ngwa ndị metụtara faiba glaasi braided sooks
Nke gara aga: ntekwasa faiba glaasi braided okpomọkụ na-eguzogide tubing
Osote: eletriki waya nchedo gburugburu sooks n'ọbọ
ntekwasa faiba glaasi braided okpomọkụ na-eguzogide tubing
insulating silicone faiba glaasi tube
braided faiba glaasi silicone roba tubing rubbe ...
faiba glaasi silicone roba braided tube
USB silicone eriri iko mkpuchi tubing
Elu àgwà silicone ewu ihe fib ...